ओली–माधव ‘मिलाप’ले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई के असर गर्ला ? - Sankalpa Khabar
ओली–माधव ‘मिलाप’ले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई के असर गर्ला ?
काठमाडौं । सत्तारुढ एमालेमा देखिएको विवाद साम्य पार्न रातारात भेटघाट र सघन वार्ता भएका छन् । त्यसको असर आजभोलिमै देखिने छ । तर, एमालेमा केपी ओली र माधवकुमार नेपाल पक्षबीच प्याच अप भएमा त्यसको असर भने नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई पर्ने देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले बागमती प्रदेशको निर्वाचनमा एमालेको माधव पक्षका खिमलाल देवकोटालाई साझा उम्मेदवार मान्ने र लुम्बिनी प्रदेशमा हालै एमाले छाडेर कांग्रेस आएका दृगनारायण पाण्डेलाई राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बनाउने सहमति गरेको थियो । तर, एमालेमा देखिएको रातारातको कसरतपछि त्यो सहमतिमा धक्का लाग्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा यसै पनि कांग्रेस कमजोर अवस्थामा छ । स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्य मात्र राष्ट्रिय सभाका मतदाता भएकाले कांग्रेसमा त्यो संख्या निकै कम छ । त्यसैले सबैभन्दा ठूलो असर कांग्रेसलाई पर्ने देखिन्छ । तर, माओवादीलाई भने त्यति ठूलो असर गर्ने छैन । देवकोटा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट उठ्ने सहमति भए पनि एमालेमा देखिएको ठूलो फेरबदलपछि राजनीतिक सिनारियो अर्कै आउने स्पष्ट छ ।
तीन वर्षअघिको निर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई पाँच वर्षका लागि प्रतिपक्षमा पठाएका हुन् । त्यसैले अब डेढ वर्ष कांग्रेसले धैर्यता राखेमा आवधिक निर्वाचनमा कांग्रेसले सफलता पाउनेमा कुनै शंका छैन । तर, तत्कालका लागि एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता टुटाउन सक्नु कांग्रेसको खुबी नै हो । यदि गत निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहकार्य नभएको भए राजनीतिक अवस्था अर्कै हुने निश्चित थियो । तीन वर्षमै ओली र प्रचण्ड अलग बनेका छन् ।
६ असार १०:४५